Ihhotela Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 * (Thailand / Phuket): izithombe kanye nokubuyekeza
Namuhla, abantu abaningi bakhetha njengoba lendawo amaholide abo kuleli zwe exotic ezithakazelisayo efana Thailand. Lapha enhle, olunothile, zikhona amabhishi eziningi kangaka uyakuthanda izivakashi. Kodwa ukuze uhlale yimpumelelo, akwanele. Sidinga omunye ehhotela ezinhle. Abantu abaningi ukunquma ukukhetha okukhethwa kukho 5-star. Nokho, omunye the best kulesi sigaba kuyinto Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 *.
Kafushane leli hhotela
Lesi sakhiwo lakhiwa futhi ngavula ngo-2010. Akunjalo kudala, ngo-2015, khona-ke wachitha ukulungiswa. Futhi okwamanje ihhotela iqanjwe kabusha - ngaphambi kwakwaziwa ngaphansi kwamagama ehlukene. Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 * Ihhotela eziyinkimbinkimbi iyathandwa ngenxa yezizathu eziningi. Futhi omunye ebaluleke kakhulu indawo yayo.
Ihhotela iseduze Patong Beach, e Phuket okuyinto ethandwa kakhulu. Ungakwazi ukufinyelela ke imizuzu 5-7. Cishe 3.5 amakhilomitha away enye Thai famous beach - Karon Beach.
Phuket Airport, ngasendleleni, futhi kolwesiNgisi. It engafinyelelwa kumaminithi 30-40. Futhi eduze ngokushesha ihhotela cabaret «Phuket Simon», Patong pier, yezitolo «Banana Hamba», nakwezinye izindawo eziningi ezithakazelisayo.
Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 *, njenganoma iyiphi ehhotela self-ukuhlonipha inikeza izivakashi nge konke kungaba kunesidingo. Lapha kukhona khulula Wi-Fi kanye yokupaka yangasese, isitoreji umthwalo, ukuvakasha edeskini futhi iphuzu lapho ungakwazi ukushintshanisa lwemali. I reception uyobe usebenza ezingeni 24/7 isisekelo, kukhona kungenzeka ukuba afeze umuntu kua nokungena.
Abanye bafuna ukuza eholidini nezingane zabo futhi wazibuza ukuthi izimo ehhotela ngabo. Nokho, lapha ke ihlelwe izingane ukudlala endaweni endlini. Okuningi ngokushesha, ungabiza umhlengikazi, ngubani oyohlala esihlalweni nengane lapho abazali besaphumule.
Ngaphezu okungenhla, ku Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 * kukhona ilondolo nge ezomile yokuhlanza service, ikamelo lengqungquthela, ibhizinisi isikhungo, inkonzo Shuttle, ukubhema, ungene lokuthumela, ukudla kanye iziphuzo ngqo efulethini, kanye nokwenzela izivakashi abanokukhubazeka. Njengoba singabona, i uhlu umxhwele. Akubuzwa, asikho elinikeziwe VIP-namasevisi. By the way, izisebenzi lapha, ngaphezu Thai, ungumnikazi Chinese ngaphezulu nesiNgisi.
Yiqiniso, izivakashi eziningi ngiye eThailand ukuzwa amasiko endawo, ukuhlola izinto futhi ujabulele iholidi beach. Kodwa, isimiso, ku Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 *, ungaba fun ngaphandle kokushiya ehhotela.
Kukhona okubhukuda ezimbili - owodwa amancane, omunye - a amanzi esikhulu, usawoti. Kukhona ithala lapho izivakashi ukuthamela ilanga.
Futhi okwamanje ihhotela inezidingo SPA-isikhungo salo. Kukhona impatho futhi ukubhucungwa amakamelo, kanye egumbini lapho aqhutshelwe kulabo abantu abeza SPA ndawonye, umbhangqwana. Lapha ungakwazi zama okuningi. Ngokwesibonelo, ukubhucunga (Thai noma imisipha ejulile), umzimba ezisonga, facials ukwelashwa (kokubili yezimonyo in kanye zokwelapha), aromatherapy noma Reflexology. Okuningi lapha ungakwazi ukujabulela Jacuzzi. Futhi by the way, khona-ke kukhona ejimini kakhulu nge imishini yesimanje kudingekile lenhlangano ephezulu grade umzimba.
Nokho, yebo, kukhona ezifana imisebenzi ejwayelekile efana izikhali table tennis.
A amazwi ambalwa Ngithanda ithini ngale ndaba. I Abadobi sika Harbor Urban kuyona Patong 5 * kukhona yokudlela kakhulu futhi Amabha amabili - enye ezivamile nabanye nge Ungadla neziphuzo. I wesithathu ngasechibini.
Izivakashi angene lapha bese sithi kwaba okumnandi, siqala ngaphandle frills. Njengoba, Nokho, futhi zonke ezinye amahhotela. Kukhona izitsha ashisayo (omelettes namaqanda ngiyocasha), ehla fresh efudumele, ayo fresh, izithelo ngokwahlukahlukana. ikhofi Good obuningi - uchithele isikhonzi, akudingeki kuphela izingcingo etafuleni. Noma kunjalo, iziphuzo kukhona eliphezulu futhi undiluted, lejabulisa.
Uma ufuna ezihlukahlukene ezinye, ungakwazi ukuya emakethe ebusuku. Ihhotela itholakala kahle, kuba lapha. Futhi kukhona kungenzeka hhayi kuphela ngamanani nesizotha ukuthenga izithelo nezinye ukudla, kodwa futhi oda ukudla kwakusihlwa (ikakhulukazi kwasolwandle athandwa lapha), okuyinto ngokushesha namaklayenti futhi ulungiselele.
Umdobi sika Harbor Urban kuyona 5 * Kunemikhakha eyahlukene amakamelo. Zonke nibaluleke kafushane. Futhi ungaqala nge amakamelo Deluxe, njengoba nje kuvamile namanje izindleko kakhulu.
Lena - ezinkulu, amafulethi enakho indawo 40 square metres. m, kuyinto ingaphakathi ezikhangayo yesimanje. Ngaphakathi, endlini zemabula iphansi, efakwe 2-embhedeni owodwa omkhulu. Kukhona-42 intshi-LCD TV neziteshi satellite, a ethokomele zihlalo endaweni nge usofa, itiye nekhofi, futhi ephephile kakhudlwana futhi mini-bar.
Deluxe ukufinyelela kuvulandi ayimfihlo ukubukwa sikhathi sinye endaweni eluhlaza, isiteshi docking for Apple, ezinamandla air conditioning, umsebenzi edeskini, bahambe-in closet, isiqandisi, yebo indlu yangasese. Kukhona eshaweni, yangasese, hairdryer, bathrobes kanokusho isivakashi ngasinye kanye amathawula, Slippers, kanye amasethi ngabanye izimonyo. Ngokuvamile, ekamelweni ilungele ukuphumula kahle. Photo ngenhla ngezilokotho, ubuka ukuthi, lalokhu lingabonakala.
Umdobi Harbor Urban Resort - Indawo abantu a-5-star Thai ehhotela, ngakho amakamelo akuzona ezishibhile lapha. Kodwa ngokuvamile, izindleko lift ehhotela kulelizinga. 7 nobusuku obuthathu Deluxe abantu ababili ngenhla echazwe izobiza ruble ecishe ibe yizinkulungwane 105, kuhlanganise kwasekuseni. Ukuze izivakashi ezintathu kubiza 120 t. P.
Kodwa kuwufanele ukukhumbula ukuthi izintengo zingahluka. On isizini, phambili yokubhuka, ukuvakasha opharetha. Ungakwazi ubhukhe igumbi ngaphandle kwasekuseni bese eshibhile. Ungagcina imali enhle, ukuhlela ngokucophelela uhambo lwakho futhi ngokwenza idiphozithi. Khona-ke intengo sevisi okungazange kukhanselwe zizofakwa, okujwayeleke-20% yazo zonke lezi zindleko. Ngokuvamile, eziningi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama.
Kukhona, ngasendleleni, okubizwa ngokuthi Family Deluxe, nomunye ngaphezulu embhedeni ngaphakathi. intengo zabo abantu abathathu kuyoba 105 m. P.
Lezi amakamelo ngesikhathi Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 * (Phuket) ayatholakala. endaweni wabo 40 sq. m, + njengasosukwini lokungivivinya Deluxe. Ngaphakathi ngokuvamile efakwe esisodwa esikhulu usayizi yinkosi embhedeni nabathandekayo njalo ezimbili. Kodwa uma abantu abanayo imibhede eziningi, zingacela ngoba okunye okukhethwa kukho. Kukhona amakamelo imibhede iwele kulesi sigaba.
Ukumelwa amafulethi 6, 7 no-8 izibuya. Facilities - kuyafana Bonke Egunjini Deluxe. izivakashi ngokuhlala lapha kuphela inikeza ntambama itiye nakusihlwa cocktail nge Ungadla ukukhanya. Basaba ukufinyelela oPhethe Lounge. Yingakho igama.
Iviki ku amakamelo enjalo (lapho sidla ukudla kwasekuseni yokukhansela zempi) izobiza izivakashi ezimbili 115 m. P. Uma uhlela ukuba axazulule lapha abantu abathathu, intengo kuzokhulisa ukuba 130 m. P.
Njengoba ungacabanga, lokhu isigaba ezindlini ziyatholakala futhi ku Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 *. Ukubuyekeza, kanye isithombe ngenhla, esisiza ukuba siqonde - kungcono okunethezeka ngempela.
Le ndawo egumbini 75 sq. m. Ludizayinelwe ihlanganise yabantu abathathu 2 izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12. Ngoba efakwe ngaphakathi okulala 2 futhi amabili-tiered. Lonke Isikhala ngokwemvelo ihlukaniswe okulala. Egumbini lokuphumula iyatholakala.
Omunye lokulala - abadala, kanye nezinye - izingane. Lapho, ngaphandle embhedeni, kukhona Xbox yegeyimu 360. Ngaphezulu izimo kungase kuqashelwe ukunakwa yokubakhona ikhofi umshini, into yokucocobalisa, esiqandisini futhi imethrikhi. Kukho konke, zonke Izinsiza ziyefana efulethini esishiwo ngaphambili.
ukuhlala Isonto ezindlini ezifana kungadla cishe 145 m. P.
Ekugcineni - a amazwi ambalwa kuleli gumbi. Lokhu-suite, yakhelwe ukuze kuhlale abantu abadala ababili, 75 square metres. m. Photo ehlinzekwe ngezansi ubonisa izinzuzo izinombolo ezinjalo.
Isikhala ihlukaniswe ahlukene lokulala enakho embhedeni usayizi wenkosi futhi egumbini lokuphumula. Lezi Suites zitholakala esitezi phezulu, ngakho ukubuka kusukela emphemeni kwanikeza emangalisayo.
Kodwa gqamisa eyinhloko kuleli gumbi - iwukuba ube yangasese yokubhukuda bese Jacuzzi. Nokho kukhona DVD-player, ikhofi umenzi, esiqandisini futhi konke libala ngaphambili. Izivakashi azinza kule suite kukhona ukufinyelela banelungelo oPhethe Lounge. Nokho ukwamukela ukuncoma - ubhasikidi nge izithelo zasezindaweni ezishisayo.
Intengo kokuhlala isonto kulezi amafulethi kuyoba 180 m. P. abantu ababili.
Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 *, isithombe okuyinto anikezwa ngenhla, kuyihhotela ethandwa kakhulu. Ngenxa kuleyo ncwadi lase inombolo oyifunayo, futhi akudingeki ukuba ukhethe kusuka ekhelini kangcono asele udaba ukubhuka kusengaphambili. Kukhona amakamelo 390 kuphela kodwa ehhotela kuyaqabukela khulula.
Ukuhambisa e iqala ngo 14:00 luphele emini. Lapha ungakwazi, baphile kanye nabantwana. Uma abantu nasabelo ingane ukuthi akanayo iminyaka emibili, ngeke kudingeke ukuba ukhokhe eyengeziwe. Ngaphezu kwalokho, ukuphathwa izonikeza uhlaka.
Mahhala futhi angazamukela ingane eneminyaka engaphansi kwengu-engu-12. Kodwa uma ineminyaka engaphezu amabili, kuzodingeka ukulala omunye imibhede ukuthi kukhona egumbini. Udinga i Embhedeni owenezelwe? Kuyoba ukufaka, kodwa ke ngolunye usuku kufanele ukhokhe extra phezu 500 Baht (mayelana 890 ruble). Lapho izivakashi woza oneminyaka engaphansi kwengu-12, i-yokuhlala yakhe futhi Embhedeni owenezelwe bayoba ukwengeza phezu 1,000 Baht (mayelana 1780 k.) Per ngosuku.
Futhi lokho okudingayo embhedeni owodwa ngaphezulu, kufanele baxwayiswa kusengaphambili. Izivakashi kumele uthumele isiqinisekiso ehhotela Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 * amasevisi walolu hlobo.
Abantu abake baya Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 * (Thailand), e Ukubuyekeza zabo, khuluma ngalokho abasebenzi abasebenza ehhotela. Futhi bonke abathi - izisebenzi lapha muhle kabi. Zonke zingamalungu inhlonipho nomoya wokungenisa izihambi, nomusa izivakashi. Mahhala inkonzo Shuttle uhlelekile futhi izimbali ekufikeni, khona, bahlele edilini noma ibhulakufesi ogwini, onguchwepheshe izithelo fresh njengoba kunconywa nsuku zonke - ukunakwa okunjalo abanakukwazi bahlala banganandaba.
Futhi-ke, amafulethi lapha bahlanza nsuku zonke. Uhlanzekile engabuzi izinkinga. Nelineni amathawula futhi lishintshwa nsuku zonke. Ezikhona kanye izimonyo (insipho, eshaweni si, amashampu, njll) agcwaliswa njalo. Nsuku zonke, ngaphezu izithelo nezimbali fresh kubhasikidi ukungezwa itiye, ikhofi kanye ukhilimu. Amabhodlela ngamanzi ahlanzekile futhi ulethe. Ngokuvamile, le sevisi ehloniphekile. Lokhu kuqinisekiswa ngakwesokunxele Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 Izibuyekezo *.
Izivakashi abaye bavakashela lapha, esijabulela ukuhlanganyela kwawo umbono mayelana iholide wachitha eThailand. Afakazela - ngamunye sakhiwa Abadobi sika Harbor Urban kuyona 5 * ncazelo ihambelana ngokoqobo. Non - njengasezinsukwini izithombe, endaweni - enhle, ehlanzekile yesimanje. Futhi ukuthi akukhona iseduze kolwandle - ngakho kulungile, imizuzu engu-15 ukuhamba ngosuku kuyasiza. Kunalokho, ezizungeze wendawo amnandi kakhulu ukuhamba.
ukunakwa okuningi ukugubha ifenisha wesimanje eyayithethelela amafulethi. I imibhede ukhululekile kakhulu, nge creaking ku ekuhlanzekeni elinemishwe futhi imicamelo Fluffy.
Nokho nakhu ethulile kakhulu. Kusukela ehhotela itholakala eduze ezintabeni. Izimoto izithuthuthu ke musa ukushayela ebusuku. ema-disco Ngezikhathi ezithile eseduze futhi amaqembu, kodwa soundproofing ku guestrooms, ngakho-ke kungaphazamisi.
Futhi, njengoba kukhona buthule, ihhotela uphelele abantu dream of a iholide okuphumuzayo. Lezi bambalwa abahamba nezingane ezincane, njengoba resort ehhotela, hhayi ukuzijabulisa, futhi begxile kakhulu ukuhlala ekhululekile kunanoma kumnandi.
izivakashi Okuningi uthande ukunikeza iseluleko kanye nezincomo. Ehlobo, phakathi ukushisa, kungcono ukuthatha amakamelo nombono yangaphakathi. Kukhona amafulethi nokuningi, balcony kuya landscape emfuleni. Kubukeka enhle, kodwa kule sizini hot akuyona nephunga elihle kakhulu, ngokuvumelana Izibuyekezo izivakashi. Nokho, ungathandi inombolo - ke kungashintshwa. Abasebenzi uzokwenza konke masinya. Ngaphandle, yebo, amafulethi kuyoba khulula.
Kodwa nokho, uma kungenzeka, kubalulekile ukuya lapha ebusika. Kungaba ngoJanuwari noma Februwari. Lapha ngalesi sikhathi, nezinga lokushisa emhlabeni 28 ° C. Ebusuku kuba okuncane ephansi - 25 ° C. Water, ngendlela, izinga lokushisa yayo kuyafana emoyeni. Futhi ngisho ebusika kukhona imvula kancane. Futhi izivakashi, okuyinto limnandi kabili ngaphezulu.
Amahhotela Novorossiysk: izintengo, izithombe, ukubuyekezwa. Amahhotela eshibhile e Novorossiysk
Incazelo Ihhotela Asia Ihhotela 3
Siya Adler. Amahhotela nge swimming pool eseduze kolwandle Adler: ukubuyekeza ohlwini, incazelo kanye nokubuyekeza
Ihhotela Gran Caribe Club Kawama 4 * (Varadero, Cuba): izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Celuisma Cabarete 3 *, Cabarete, Dominican Republic: i Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Ukusebenza Porsche eCayenne
Indlela yokupheka imvuthu ngegalikhi
Kuyini idivayisi asalile zamanje
Silicone namasongo. abicah namasongo nge logo
Isivumelwano esenziwe ngokuhlanganyela: kuyini abasebenzi?
Uyini memoir? "Geisha" - lithathelwe ifilimu kule noveli yodumo Arthur Golden
Nenzuzo Economic kube inkomba yokuthi ukuthuthukiswa inethiwekhi ukusatshalaliswa futhi ukusatshalaliswa inqubomgomo yebhizinisi zezimboni